खेलकुद Archives - Online Tamang
नेताहरुले झुकाएको नेपालको शिर सन्दिपले ठाडो पारेर, सान र मानका साथ नेपालमा आइपुगे, विमानस्थल आएपछि पत्रकारसंग कुरा गर्दै यसो भने (भिडियो)
नेताहरुले झुकाएको नेपालको शिर सन्दिपले ठाडो पारेर, सान र मानका साथ नेपालमा आइपुगे, विमानस्थल आएपछि पत्रकारसंग कुरा गर्दै यसो भने (भिडियो)काठमाडौँ — इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) खेल्ने पहिलो नेपाली बनेका सन्दीप लामिछाने म‌ंगलबार स्वदेश फर्किएका छन् । उनलाई कप्तान पारस खड्काले स्वागत गरेका हुन्। उनलाई स्वागत गर्नको लागि खेलकुदप्रेमी र शुभेच्छुकहरूको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भीड लागेको थियो। त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले आइपिएलमा सहभागी भएर आफूले धेरै उपलब्धि हासिल गरेको बताए। केही दिनपछि उनी बेलायतको लर्डसमा हुने वेस्ट इन्डिजविरूद्ध आइसिसी विश्व ११ को खेलमा सहभागी हुन जानेछन्। साउन तेस्रो सातादेखि उनी अनुबन्धित भएको क्यारेबियन प्रिमियर लिग सुरू हुनेछ। आईपीएलको डेब्यू खेलमै उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । दिउँसो ४ बजेर १५ मिनेटमा जेट एयरवेजको
आइपिएलमा खेल्न दील्लीले किन्यो सन्दिपलाई ३ बर्षका लागि, टिकट पक्का गरेर फर्किए सन्दिप ! अहिले काठमाडौं विमानस्थलमा पत्रकारसंग बोल्दै यसो भने (भिडियोसहित)
आइपिएलमा खेल्न दील्लीले किन्यो सन्दिपलाई ३ बर्षका लागि, टिकट पक्का गरेर फर्किए सन्दिप ! अहिले काठमाडौं विमानस्थलमा पत्रकारसंग बोल्दै यसो भने (भिडियोसहित)काठमाडौँ । चर्चित क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने आइपीएल खेलेर स्वदेश फर्किएका छन् ।इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को आफ्नो पहिलो सिजनमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने अर्को सिजनका लागि टिकट पक्का गरेर आज स्वदेश फर्किएक हुन् । एक महिना लामो बसाईपछि उनी भारतबाट आज स्वदेश फर्किका हुन् । विमानस्थलमा पत्रकारसँग बोल्दै सन्दिपले आईपीएल आफ्ना लागी एउटा ठूलो अवस्र र चुनौती भएको बताएका छन् । केही दिनपछि उनी बेलायतको लर्डसमा हुने वेस्ट इन्डिजविरूद्ध आइसिसी विश्व ११ को खेलमा सहभागी हुन जानेछन्। साउन तेस्रो सातादेखि उनी अनुबन्धित भएको क्यारेबियन प्रिमियर लिग सुरू हुनेछ। आइपिएलमा सन्दीपलाई दिल्ली डेयरडेभिल्सले तीन वर्ष
आईपीएलमा सन्दिपले मुम्बर्इविरुद्ध सनसनी मच्चाउदै ब्यक्तिगत ३ ओभरको बलिङ सकिंदा ३ विकेट लिदै राखे अर्को रेकर्ड ! विकेट लिदै गरेको लोभलाग्दो दृश्य हेर्न यो भिडियोमा हेर्नुहोस
आईपीएलमा सन्दिपले मुम्बर्इविरुद्ध सनसनी मच्चाउदै ब्यक्तिगत ३ ओभरको बलिङ सकिंदा ३ विकेट लिदै राखे अर्को रेकर्ड ! विकेट लिदै गरेको लोभलाग्दो दृश्य हेर्न यो भिडियोमा हेर्नुहोसआईपीएल क्रिकेट २०१८ को आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालका सन्दीप लामिछानेले लोभलाग्दो बलिङ गरिरहेका छन् । मुम्बई इण्डियन्ससंगको खेलमा सन्दिपले ब्यक्तिगत ३ ओभरको बलिङ सकिंदा ३ विकेट लिएका छन् । दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट खेलिरहेका सन्दिपले ३ विकेट लिन ३२ रन खर्चेका छन् । दशौं अोभरमा अाफ्नो दोस्रो अोभर लिएर अाएका सन्दीपले वेष्ट इण्डिजका किरण पोलार्डलार्इ पहिलो र चौथो बलमा क्रुनाल पाण्डेलार्इ पवेलिएन फर्काएका छन्। ७ रनमा खेलिरहेका पोलार्डलार्इ सन्दीपले ट्रेन्ट बोल्टको हातबाट क्याच गराएका थिए भने ४ रनमा खेलिरहेका पाण्ड्यालार्इ राहुल टुवासियाको हातबाट क्याच गराएका थिए। यसअघि पहिलो अोभरमै सन्दीपले सुर्यकुमार यादवको विकेट लिएका थिए
सन्दिप राम्रो खेल्न सक्छन भन्ने थाहा पाएर पनि किन बेच्मा राखियो ? टिमका प्रशिक्षक रिक्की पोन्टिङले दिए यस्तो स्पष्टीकरण
काठमाडौं – प्ले अफमा छनौट हुने अंकगणितिय सम्भावना मात्र रहेको अवस्थामा मात्र ३ खेल बाँकी रहँदा नेपालका स्टार बलर सन्दीप लामिछानेले डिल्ली डेयर डेभिल्सबाट जारी भारतीय क्रिकेट लिग (आइपिएल)मा बैङलोरको टिम विरूद्ध डेब्यू गर्न पाए। सो खेलमा सन्दीपले बैङलोरका सुरूवाती ब्याट्सम्यान पार्थिव पटेलको विकेट लिए। दिल्लीको फिरोज शाह कोटला मैदानमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंलोरविरूद्ध बलिङ गरेका लामिछानेले ४ ओभर बलिङ गर्दै २५ रन खर्चिए र सबैभन्दा कम इकोनोमी ओभर बलर भए। त्यस्तै चेन्नई सुपर कि.सविरूद्ध पनि उनले उत्कृष्ट बलिङ गर्दे भारतीय स्टार ब्याट्सम्यान सुरेश रैनालाई आउट गरे। सो खेलमा उनले ४ ओभर बलिङ गर्दै २१ रन खर्चेर १ विकेट लिए। त्यस्तै दिल्लीको यस वर्षको अन्तिम आइपिएल खेलमा उनले मुम्बई इन्डियन्स विरूद्ध ४ ओभर बलिङ गर्दै ३६ रन दिदैं महत्वपूर्ण ३ विकेट झारेर आफूलाई उत्कृष्ट सावित गरे। विर
२४ घण्टादेखि निदाएका थिएनन् शाहरुख खान, जीत पछि भने– अब झन् निदाउन सक्दिन
२४ घण्टादेखि निदाएका थिएनन् शाहरुख खान, जीत पछि भने– अब झन् निदाउन सक्दिनबलिउडका किङ खान र आईपीएल फ्रेन्चाइजी कोलकाता नाइट राइडर्सका मालिक शाहरुख खान यतिबेला फिल्म ‘जीरो’ को शुटिङमा व्यस्त छन्। यही कारण शाहरुख खान बारम्बार आईपीएलको खेल हेर्न स्टेडियमसम्म पुग्न पाउँदैनन्। शनिबार हैदराबाद विरुद्धको खेलमा जीत हासिल गरेसँगै कोलकाताको टीम प्लेअफमा पुगेको छ। जीतपछि शाहरुख खानले भावुक बनाउने ट्वीट गरे। शाहरुख खानले जीतपछि आफू २४ घण्टादेखि जागै रहेको बताए। उनले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘यो खुशी हेर्नलाई २४ घण्टादेखि जागै छु। धन्यवाद दिनेश कार्तिक, प्रसिद्ध कष्णा (वेल डन योङ म्यान) र सुनील नारायण त सुनील हुन्। धेरै खुशी छु। अहिले सुत्न पाउँदिन।’ कोलकाता नाइट राइडर्सले हैदराबादलाई पाँच विकेटले पराजित गर्दै प्लेअफमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ। दुई पटकको च्याम्पियन कोलकाताले यो पटक गौतम गम्भी
मुम्बई प्लेअफमा पुग्न असफल, दिल्लीको जितमा सन्दीपको ३ विकेट
गत बर्षको आइपिएलको विजेता मुम्बई इण्डियन्स प्लेअफमा पुग्न असफल भएको छ । आइतबार भएको खेलमा दिल्ली डेयरडेभिल्ससँग पराजित भएपछि मुम्बई प्लेअफमा पुग्न असफल भएको हो । दिल्लीले मुम्बईलाई ११ रनले पराजित गरेको हो । दिल्लीले दिएको १७५ रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले १९.३ ओभरमा अल आउट हुदै १६३ रन बनाएको थियो । मुम्बईका लागि इवेन लुइसले सर्वाधिक ४८ रन बनाएका थिए । त्यस्तै बेन कटिंगले ३७, हार्दिक पाण्डेयले २७ रन बनाएका थिए । दिल्लीका लागि सन्दीप लामिछाने, अमित मिश्रा र हर्षल पटेलले ३-३ विकेट लिएका थिए भने टोरेन्ट बोल्टले एक विकेट लिएका थिए । आइपिएलको लिग चरणको अन्तिम खेल खेलिरहेको मुम्बई इण्डियन्सलाई दिल्ली डेयरडेभिल्सले १७५ रनको लक्ष्य दिएको छ । यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिंग गरेको दिल्लीले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउदै १७४ रन बनाएको थियो । दिल्लीका लागि रिषव पन्तले सर्वाधिक ६४ रन बनाएका
आइपिएलमा यस्तो रेकर्ड राख्दै सन्दीप विश्वकै टप बलरहरुभन्दा अगाडि शिर्ष स्थानमा, अन्तरास्ट्र
काठमाडौं। आइपिलमा दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट केबल दुई खेल मात्र खेलेका सन्दीपले यस सिजनमा सबैभन्दा कम रन दिने बलर बनेका छन् । ११ खेलमा बेन्चमा बसेका सन्दीपले दुई खेलमा ८ ओभर बलिङ गर्दै इकोनोमी रेटको आधारमा शिर्ष स्थानमा रहेका छन् । सन्दीपले दुई खेलमा ८ ओभर बलिङ गर्दै ४६ रन दिएर दुई विकेट लिएका छन् । सन्दीपको प्रति विकेट रन २३ छ भने उनको इकोनोमी ५.७५ प्रति ओभर रहेको छ । यस सुचिमा दोस्रो स्थानमा राजस्थानका इश सोढ़ी रहेका चाहन उनको इकोनोमी रेट ५.९३ रहेको छ । त्यस्तै तेस्रो स्थानमा सनराइजर्स हैदरावादका सन्दीप शर्मा रहेका छन् उनको इकोनोमी ६.३१ रहेको छ । त्यस्तै चौथो स्थानमा रहेका राजस्थानका डी आर्ची शर्टको इकोनोमी ६.३३ रहेको छ । पाचौ स्थानमा मुम्बईका जप्रित बुमराह रहेका छन् उनको इकोनोमी ६.८६ रहेको छ ।काठमाडौं। आइपिलमा दिल्ली डेयरडेभिल्सबाट केबल दुई खेल मात्र खेलेका सन्दीपले यस सिजनमा सबैभ
सन्दिप लामिछानेको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा दिल्ली डेयर डेभिल्स विजयी, आज पनि उनले सानदार विकेट झारेका थिए
सन्दिप लामिछानेको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा दिल्ली डेयर डेभिल्स विजयी, आज पनि उनले सानदार विकेट झारेका थिए काठमाडौँ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा चेन्नई सुपर किङ्सविरुद्ध आफ्नो दोस्रो खेलका क्रममा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछालेले आफ्नो बलिङको कमाल देखाएका छन् । https://i0.wp.com/www.sajhapage24.com/wp-content/uploads/2018/05/0F597EE7-8920-431E-80AF-4B3CE0213155.jpeg?w=750 लगातार पराजित हुँदै आएको दिल्लीले सन्दीपको कसिलो र किफायती बलिङसँगै महेन्द्रसिंह धोनी नेतृत्वको चेन्नईलाई ३४ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ ।https://i0.wp.com/www.sajhapage24.com/wp-content/uploads/2018/05/33020216_2086818568014017_8254351922237014016_n.jpg?resize=1024%2C768 दिल्लीले घरेलु मैदान फिरोज शाह कोट्लामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्दै १६३ रनको चुनौती दिएपछि जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको चेन्नई पुरै
के आज सन्दिपले विश्व चर्चित क्रिकेटर ध्वनिलाई विकेट लेलान ?
इण्डियन प्रिमियर लिग(आइपीएल)मा शुक्रबार साँझ नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको टोली दिल्ली डेयरडेभिल्सले शुक्रबार चेन्नई सुपरकिंग्सको सामना गर्दैछ । भारतीय पूर्व कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नईसँगको खेलमा सन्दीपले खेल्ने सम्भावनाका बारेमा चर्चा सुरु भएको छ । दिल्लीको घरेलु मैदान फिरोजशाह कोट्ला मैदानमा हुने खेल दिल्लीका लागि प्रतिष्ठाको खेलमात्रै हुनेछ। किनकी दिल्लीले यसअघि नै प्लेअफबाट पुग्ने सम्भावना गुमाइसकेको छ। यस खेलको हार(जितले चेन्नईलाई पनि खासै फरक पर्दैछ। किनकी चेन्नइले प्लेअफमा यसअघि नै स्थान बनाइसकेको छ। तर, जितले चेन्नईलाई प्लेअफको बलियो टोलीका रुपमा भने सिद्ध गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। यसअघि खेलेका १२ खेलमध्ये दिल्लीले ३ खेलमा मात्रै जित हात पार्न सकेको छ। चेन्नइले भने त्यतिनै खेलमा ८ खेल जितेको छ। चेन्नई १६ अंकका साथ अंकतालिकामा दोस्रो तथा ६ अंकमात्
सन्दिप लामिछानेलाई भारतिय मिडियाले यस्तो भन्यो । नेपाली खेलाडीले बिश्वमै मच्चाए शनशनी । मोदीले नेपाल हल्लाउँदा सन्दिपले भारतमा राज गरे भिडियो सहित
A key objective when the Indian Premier League (IPL) was launched in 2008 was to unearth talent in the teams’ catchment areas, and help it grow in the environment of international stars. That rule was flouted by franchises from the start as domestic talent came to the fore more by chance. But the world’s biggest T20 league is tapping into another catchment area.A key objective when the Indian Premier League (IPL) was launched in 2008 was to unearth talent in the teams’ catchment areas, and help it grow in the environment of international stars. That rule was flouted by franchises from the start as domestic talent came to the fore more by chance. But the world’s biggest T20 league is tapping into another catchment area.A key objective when the Indian Premier League (IPL) was launched
-एक बाउले आफ्नो छोरीको बिहेको कार्डमा यस्तो लेखेर छपाए जुन देखेर सबै चकीत…के थियो आखिर ? जान्नुहोस (3)